1Password: yakaburitswa zviri pamutemo yeLinux natively | Linux Vakapindwa muropa
1Password ndeimwe yemaneja edzidziso chinonyanya kuzivikanwa. Kusvikira chinguva chakapfuura yaiwanika kune akati wandei ekushandisa masystem uye kubatanidza mune akasiyana webhu mabhurawuza, kune rimwe divi, yanga isina kugadzirira GNU / Linux natively. Mushure menguva yakati muchikamu cheBeta, kubvira gore rapfuura, izvozvi yakatangwa nenzira yakatetepa.
Zvino, vashandisi vanoda kunakidzwa ne kunyaradzwa uye kuchengeteka ye password password maneja sengePassword, vanogona kuzviita neapp iyi. Zvakare, vari vekuzvarwa, vakave vakabatanidzwa zvisina musono nemhando dzese dzemahara nenzvimbo dzedesktop.
Kunyangwe isiri yekuvhura sosi software, chokwadi ndechekuti iyo app inotora mukana weakati wandei matekinoroji ari, akadai seElectron uye iyo Rust programming mutauro. Kune rimwe divi, zvakare haina kusununguka kupfuura nguva yayo yekuyedzwa. Kugona kuishandisa zvisina muganho, unogona bhara kunyorera kunotanga pa $ 2.99 / mwedzi. Izvi zvinosanganisira kushandiswa kwepassword maneja uye zvimwe zvekuwedzera, senzvimbo yekuchengetera, chinhu chenhoroondo, nezvimwe.
Zvimwe 1Password yezvinhu zveLinux Ndizvo:
Kugona kuisa iyo Rima Mode yakavakirwa pane GTK theme.
Tsigiro yenzvimbo dzakavhurika dzemumbure (FTP, SSH, SMB).
Kubatana pasina musono ne KDE Plasma, GNOME, nevamwe.
Kubatanidzwa pamwe neiyo default web browser.
X11 clipboard kusangana.
Tsigiro yeGNOME Keyring uye KDE Wallet.
Kubatanidzwa nekernel keyring.
Tsigiro yeDBUS API.
CLI API rutsigiro.
Kubatanidzwa nehurongwa hwekukiya uye isina basa.
Dhawunirodha uye gadza 1Password
Kuti utange kushandisa 1Password Pane yako yaunofarira GNU / Linux distro, unogona kushandisa yako yaunofarira package package yekumisikidza. Iwe unogona zvakare kuiwana mune akasiyana marekodhi uye muzvitoro zveapuro senge Ubuntu Software. Imwe mukana ndeye dhawunirodha iyo DEB kana RPM package zvakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Iko kune Snap package yatovepo, asi chenjerera iyi sezvo isipo yekubatanidza browser uye dzimwe nzira dzechokwadi dzechokwadi. Naizvozvo, iri sarudzo isingafadzi kupfuura mapakeji epamutemo.
Paunenge waiswa, yeuka kunyoresa kuti utange kuyedza iyo 14-zuva rekuyedza nguva. Mushure menguva iyoyo yemahara, iwe unofanirwa kubata chimwe chezvinowanikwa zviripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » 1Password - Yakaburitswa zviri pamutemo yeLinux